Musharraxii 4aad oo isu soo taagay xilka madaxweynaha maamulka Mudug & Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Musharraxii 4aad oo isu soo taagay xilka madaxweynaha maamulka Mudug & Galgaduud
Mareeg.com: Musharraxii 4-aad ayaa isu soo taagay xilka madaweynaha maamulka Gobollada Dhexe ee la doonayo in laga dhiso Mudug iyo Galgaduud.
Wasiirka Amniga ee maamulka Ximan iyo Xeeb, Maxamed Daahir Muxumad oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee maamulka loo yegleelayo gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Waxaa uu sheegay in uu go’aankan qaatay ka dib latashiyo uu la sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada, oo ku nool maamulka Ximan iyo Xeeb isla markaana ku dhiiri geliyay arintaasi isagoo sheegay in uu taageero balaaran ka haysto dadka ku dhaqan deegaanada uu maamulkaasi quseeyo.
Horay waxaa xilkaas isu soo taagay madaweynaha maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawllinaale Qeybdiid, Agaasimihii hore ee Sirdoonka Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi iyo C/raxmaan Diinaare oo horay u ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiyey Koonfurta Sudan.